Ziziphi iinzuzo zeCredit Certified Certification (CEH)
Ukuphucula ukuqonda kwakho ingozi kunye nobungozi
Mbonise indlela yokwenza inkqubo yokucingela inkohlakalo
Akubalulekanga kuphela kubahloli beepenetration
Ukuphucula umvuzo wakho kunye ne-CEH Certification
Uya kuqonda ukuba ungasebenzisa njani izixhobo zokuqhawula
Indlela efanelekileyo kakhulu yokufumana isatifikethi sakho se-CEH esheshayo
Kunyaka owedlule i-website yezobugcisa evelele, iindaba zeBeta, zathetha malunga nendlela iindawo zokuqhawula ezemigaqo ziphakathi kwezona zinto zingcono kwi-cyber security. Eli nqaku libhekiselele ukuma phakathi kweziqinisekiso zokuhlola zokungena ezikhoyo, i-Certified Ethical Hacker (CEH).
I-CEH yayiyi-certification eyona nto yokuzisa "i-cap" emacaleni kwinkqubo yeqela eliqhelekileyo lababonisi be-IT; kunika ukufundwa kulindeleke ukuba kulindeleke ngokusemgangathweni kwaye kuphunyezwe kwiindlela zobugebengu ze-cyber.
Ngenxa yesithandwa sale siqinisekiso, inani elikhulu labaqeqeshi behlabathi liceba ukulifeza. Ukuba ucinga nge-CEH ngokunjalo, uya kufuneka ukwazi izibonelelo zangaphambili ozifaka ithuba lakho kunye nemali.
Le yile izibonelelo ze-CEH:
I-CEH iya kunika inkxaso yakho
Yenza umsebenzi wakho wokhuseleko
Kule nqaku siza kucacisa nganye yezi zizathu. Funda ukuze usebenzise ngaphakathi nangaphandle uphumelele ukuba kutheni ufuna ukufeza isatifikethi. Ziziphi iinzuzo ze-CEH?
Abaphuli be-Cyber ​​boovulindlela kwaye baya kuhlala befumana iindlela ezingcono zokuhlasela iziseko ze-IT kwaye zixhaphaze.
Ngaphandle kolwazi lweengozi kunye nobuthathaka obunxulumene nezikhokelo zakho ze-PC, uza kuba nexesha elixakekayo lokuzigcina zikhuselekile.
Ngokuqwalasela ukuhlolwa kwe-CEH, uya kuqonda indlela abaqhubi bahlola ngayo inkqubo yakho yokugqiba ukuba unenjongo yokuhlaselwa. Iimodyuli ezisisiseko kwi-CEH ziya kukubonisa le nkqubo, ngoko unokufaka isicelo kwishishini lakho:
XMUMX i Module: Isingeniso kwiCheck Hacking
XMUMX i Module: UkuPhathwa kweeNyawo kunye nokuQaphela
XMUMX i Module: UkuSesha iiNethiwekhi
XMUMX i Module: Ukuhlawula
Le mimandla icacile kwaye isakhela isiseko esomeleleyo sokubona indlela ukukhubazeka kubangele imibutho kwimimiselo yansuku zonke.
Ukufezekisa CEH unikeza "i-cap white" i-IT professionals ngokuqonda kwimbono yecala lobugebengu.
Nangona ukulwa nokulwa nezigebengu ngokuxhomekeka kubandakanya ukuphendula kwiingozi kunye neziganeko njengoko kwenzeka, kubaluleke kakhulu ukubona ukuba aba baphuli-mthetho baqondisa njani ukuhlaselwa kwabo kunye neendlela zenkcukacha.
Ngokuqulunqa indlela yokwenza inkqubo yokucinga, uyakuba nekhono lokwenza isicwangciso esisebenzayo, ukhangele ngaphaya kwamasu akho okukhusela kunye namalungiselelo akho okukhusela okwangoku ukuba ungeke uncedo kwi-cyber-criminals.
The CEH ayenjalo kuphela abahloli beepenetration. Isatifikethi esinokuzilungelelanisa simele sigqibelele ngokukhuseleko kwe-IT kunye nabaqeqeshi beenkqubo.
Ukuba ngaba ulawulo lweenkqubo, unesigqi esifanelekileyo sokudibanisa ukufunda kwakho ukhuseleko lwe-cyber kunye ne-CEH. Ukufunda okwenyaniso okwangoku okuyalelwe nge-CEH kuya kuphelela wena kunye neqela lakho ukukhusela inkqubo yakho malunga nabaphuli be-cyber.
Enyanisweni, abaqeqeshi bezokhuseleko ze-IT baya kuzuza inxaxheba ekufezeni i-CEH. Ngethuba elide lokuba uthathe isitifiketi esingaqhelekanga, esifana ne (ISC) ye-CISSP ye-2, i-CEH iya kubuthela ulwazi lwakho lokhuseleko lwenkqubo ye-commonsense-olugqibeleleyo xa ludibene neengcinga kunye neziphumo zokulawula ezisebenza kwiCISSP.
Ukufezekisa isatifikethi esifumanekileyo sezezimbonakaliso kukubonakaliswa kwamandla akho kwaye kunokubaluleka xa uguqulela ukuhlawulela iinxalenye ezintsha.
Umvuzo oqhelekileyo weengcali ngokuqinisekiswa kwe-CEH yi-£ 55,000, njengoko kuboniswe ngolwazi oluvela kwi-ITJobsWatch. Oku kunyuka kwi-£ 67,500 kunye ne-£ 87,000 ye-Testet Penetration kunye neendawo eziphezulu zePenetration tester.
Ngaphantsi komfanekiso ubonisa izihlawulelo eziqhelekileyo kwiingcali eziqinisekisiweyo ze-CEH, ukunyanzeliswa kwe-ITJobsWatch.
Ngethuba elide lokuba uvele nje uqokelele uzinziso oluqinileyo kwi-IT kwaye ufunde indlela amanethiwekhi asebenzisana ngayo kwimibutho (usenokuba uphumelele ukuqinisekiswa kwe-CompTIA A + kunye neNethiwekhi, umzekelo) - i-CEH inokukunika indlela yokukhulisa ingqiqo yakho ukuphepha kwe-IT.
Ngethuba lokuba ungoko kwaye kufuneka udibanise inxalenye ehlawulelwayo ngaphakathi kwokhuseleko lwe-cyber, cinga ukufezekisa i-CEH kufuphi ne-Certified Security + certification ye-CompTIA. I-CEH iya kuvelisa ingqiqo yakho kwizixhobo kunye neenkqubo ezisetyenziswe ngabagculi, ngelixa u-Ukhuseleko + luza kunika isiseko se-IT yokufunda.
Nangona usenokukhangela ngokufanelekileyo uphuculo oluthile lokusebenzisa amava akho (okanye ukuzalisa iinqwenela zakho), akunakwenzeka ukuba ufundiswe ngaphakathi nangaphandle kokufunda okufunekayo ukusebenzisa nokuqonda ezi zixhobo.
Kukho nawuphi na, ngokusebenzisa i-CEH uza kuqonda indlela yokusebenzisa izixhobo ngokwazo - izifundo zokuziphatha ngokukhawuleza ezisemthethweni ziza kufaka i-140 yangempela yeelabhu kunye nezinye izixhobo zokuqhawula i-2,200.
Ukuqaphela indlela abahlaseli abanokuthi basebenzise ngayo amathuluzi ahlukeneyo kunceda ukwazi ukukhusela ngakumbi amanethiwekhi, izicelo kunye nezixhobo ezahlukeneyo.
Lungiselela ngeZiko leNkcazo ze-Innovative kwi-course yokukhawuleza yokuziphatha ngokukhawuleza kwaye uza kuqinisekiswa kwiintsuku ze-5 kuphela.
Kwiintsuku nje ze-5
CEH v10 Yintoni entsha? Iqinisekiso se-Ethical Hacker Certification v10